Fomba fampiharana ny aloky ny maso tsikelikely | Bezzia
Ny fianarana ny fomba fampiharana tsara ny masomaso dia tena ilaina mba hahatratrarana makiazy vaovao, voajanahary ary mety amin'ny fotoana rehetra. Misafidy ireo alokaloka diso, tsy fanarahana ireo dingana marina na mitsitsy fotoana amin'ny ampahany tena ilaina, dia mety hahatonga ny haingon-tarehy ho haingo sy tsy matihanina.
Fa kosa, amin'ny tetika tsotra vitsivitsy dia azonao atao ny manintona ny endrikao, vaovao sy manaitra kokoa. Te hianatra hametaka eyeshadow tsikelikely ve ianao? Mampianatra anao eto ambany izahay. Ianao ihany no mila vokatra fototra sasany ary borosy kalitao sasany ho an'ny makiazy tsy misy kilema.
1 Eyeshadows, ny loko ifotony izay mifanaraka amin'ny rehetra
2 Manaingo ny maso, apetaho tsikelikely ny aloka
3 Tsara tarehy tarehy vokany amin'ny tarehy tarehy androany
Eyeshadows, ny loko ifotony izay mifanaraka amin'ny rehetra
Raha tianao kosmetika sy makiazy afaka manana fahafinaretana be dia be ianao mamorona sy milalao amin'ny vokatra makiazy, satria malalaka be ny tolotra. Na izany aza, raha manomboka ianao dia azo inoana fa tsy dia nazava tsara momba ny vokatra ilainao a maso mamorona fototra. Ireto vokatra manaraka ireto dia tsy tokony hanjavona ao amin'ny kitapo fidianao:
Primer maso. Tena ilaina ny Primer, toy ny manampy ny aloka hipetraka tsara ary tsy miharatsy ny makiazy mandritra ny ora maro.
Palety fototra misy tonony tsy miandany. Hanombohana azy dia mila loko tetezamita maivana ianao, miankina amin'ny lokon'ny hoditrao ny tonony, satria mety amin'ny loko mavokely na mavo. Palety misy alokaloka 4 amin'ny loko tsy miandany Ho ampy izany, afaka misafidy volontany na mavokely ianao, izay tsara indrindra amin'ny karazan-koditra rehetra.
Borosy misy karazany isan-karazany. Borosy hametahana loko, iray hafa afangaro ary fisaka hametahana ny loko lehibe indrindra. amin'ny borosy beveled afaka manao drafitra marefo miaraka amin'ny aloka ianao.
Manaingo ny maso, apetaho tsikelikely ny aloka
Ankehitriny manana ny vokatra ilaina izahay dia hanomboka hampihatra ireo vokatra. Talohan'izay dia ilaina ny manomana tsara ny hoditra. Mampiasà savony malefaka hanadiovana ny hoditra sy hydrate tsara amin'ny vokatra kosmetika mahazatra anao, aza adino ny momba ny volon-tongotry ny maso. Avelao hisitrika tsara ny vokatra vita amin'ny crème, alohan'ny hanombohana ny aloka.
Voalohany dia mila mampihatra ny voalohany isika. Azonao atao ny mampiasa ny tendron'ny rantsan-tànanao mankany aparitaho tsara ny vokatra manerana ny hodi-maso.
Ny aloky ny tetezamita. Safidio ny maivana, mavo, mavokely na perla, hamehezana ny primer izay ampiharintsika voalohany. Tena zava-dehibe ity dingana ity, satria hanampy anao hifangaro tsara kokoa ireo aloka hafa.
Ny feo afovoany. Ankehitriny dia tokony haka ny alokaloky ny loko mpanelanelana ianao, volontsôkôlà mena na mavokely hoditra. Makà vola kely mba hahafahanao manampy loko raha ilaina. Mitandrina, apetaho amin'ny hodi-maso finday iray manontolo ity feony ity ary miakara kely bebe kokoa, ka ny hodi-maso ambony tsy manarona ny aloka.
Apetaho ny loko maizina indrindra. Makà borosy hafa izao ary apetraho amin'ny loko kely ny fikasihana kely ao amin'ny vodi-mason'ny ivelany, manaova vee kely hitarika anao amin'ny bikan'ny masonao.
hampanjavozavo. Mandehana miaraka amin'ilay borosy moka fampidirana ireo tonony samihafa amin'ny faritra iarahan'izy ireo. Mba miray feo ny tonony ary tsy tsikaritra ny fahatapahana na ny tetezamita.
Delineate. Raha te-hanampy doka sarotra kokoa amin'ny makiazy amin'ny masonao ianao dia afaka manamboatra tsipika manify iray miaraka amin'ilay borosy beveled. Raiso ny aloka maizina indrindra ary manaova fikitika kely hamoronana drafitra manomboka eo afovoan'ny mpianatra manodidina ny zoro.
Tsara tarehy tarehy vokany amin'ny tarehy tarehy androany
Mety tsy manam-potoana hanaovana makiazy be pitsiny isan'andro ianao, fa amin'ny dingana roa dia azonao atao ny manova ny bika aman'endrikao ary mitondra fahazavana sy tanjaka. Ianao ihany no mila asio alokaloka maivana miaraka amina hazavana mazava amin'ny hodi-maso iray manontolo. Miaraka amin'ny borosy fisaka mando, makà aloka kely mitovy aminy ary apetaho amin'ny tapany afovoan'ny hodi-maso. Momba ilay mpianatra.
Aza adino ny mascara, satria io no dingana lehibe indrindra amin'ny makiazy amin'ny maso. Saron-tava tsara manokatra ny fijery, mampihena ny fahatsapana reraka ny maso ary afaka mamadika ny makiazy ho asa tena matihanina izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fomba fampiharana ny eyeshadow tsikelikely
Tote kitapo sy mpiantsena ho an'ny andronao amoron-dranomasina